Akụkọ - Teknụzụ ndị dị mkpa na atụmanya mmepe nke sistemụ nchekwa batrị lithium
Teknụzụ ndị dị mkpa na atụmanya mmepe nke usoro nchekwa batrị lithium
Mgbasa Ozi Nchekwa Polaris Energy: 2017 Urban Energy Internet Development (Beijing) Forum na Energy Internet Demonstration Project Mwube na Mmekọ Seminar mere na December 1, 2017 na Beijing. N'ehihie nke teknuzu teknụzụ, Jiang Jiuchun, onye isi ụlọ ọrụ National Energy Active Distrib Network Technology R&D Center, kwuru okwu n'isiokwu ahụ: teknụzụ ndị bụ isi nke usoro nchekwa batrị lithium.
Jiang Jiuchun, Director nke National Energy Active Distribution Network Technology R&D Center:
Ana m ekwu maka nchekwa ike batrị. Mahadum Jiaotong anyị nọ na-eme nchekwa nchekwa, site na sistemụ ọkụ eletrik na ụgbọ ala eletrik ruo na ụzọ ụgbọ oloko. Taa, anyị na-ekwu maka ụfọdụ n'ime ihe anyị na-eme na ngwa sistemụ ikike.
Ntụziaka nyocha anyị bụ isi: otu bụ micro-grid na otu bụ ngwa batrị. Na ngwa batrị, ụgbọ ala eletrik ndị mbụ anyị jiri nchekwa nchekwa ike na sistemụ ikike.
Banyere ihe kachasị mkpa banyere nchekwa batrị, ihe iseokwu bụ nchekwa; nke abụọ bụ ịdị ogologo ndụ, yana arụmọrụ dị elu.
Maka usoro nchekwa ume, ihe mbụ ị ga-atụle bụ nchekwa, yana arụmọrụ. Hedabere na arụmọrụ, ọnụego mgbanwe, na ndụ, yana ike ojiji mgbe batrị dasịrị, nwere ike ọ gaghị abụ nsogbu a na-ebelata n'ọtụtụ oge. Ndị na-egosi iji kọwaa ya, mana ọ kwesịrị ịdị ezigbo mkpa maka nchekwa nchekwa. Anyị nwere olile anya na site n’ọtụtụ ihe, anyị nwere ike idozi nsogbu nke ndụ nchekwa na arụmọrụ dị elu. Ejiri usoro nchekwa ike na usoro nyocha kaadi maka ọnọdụ batrị na-eji ụgbọ ala eletrik na usoro njem ọha na eze.
Ka ọ dị ugbu a, iji usoro nchekwa ike, njikwa ọnụ na igbe nkesa ihe ọgụgụ mmadụ na - eji, na - eme ka akụ na ụba na nkwụsi ike nke sistemụ ahụ dịkwuo mma, na - eme ka uru nke ndị na - akpọ sistemu na - adịwanye mma, ma nwee ike ịnwe ọ friendlyụ nke ihu igwe ojii. ikpo okwu.
Nke a bụ usoro usoro nhazi oge ume. Emeela nhazi a ka ejiri doo anya nke ọma n'ụtụtụ a, anyị ga - enwetakwa usoro kachasị mma ogologo oge nke ịchekwa ọtụtụ ihe nchekwa ike na microgrids site na ndị na - achịkwa ọtụtụ oghere.
Ugbu a, e mere ya ka ọ bụrụ ọkọlọtọ ikike ikesa ikike ọgụgụ isi. Nke a bụ njirimara bụ isi ụlọ ọrụ nkesa ike. O nwere ọrụ di iche iche, dika ịnye ya ikikere na ikwuputa ya, ihe nchekwa ya na aka ya. Nke a bụ akụrụngwa akụrụngwa.
Onye njikwa ọnụ na-arụ ọrụ akụrụngwa njikwa ike dị na mpaghara, ọrụ nchịkọta data, ihe nlele, nchekwa, atụmatụ njikwa igbu egbu na ibugote. Enwere nsogbu ebe a chọrọ nyocha siri ike na nke omimi na ọnụego nnakọta data na oge nnwale data mgbe ị na-ebugo data. N'ụzọ dị otú a, a na-etinye nyocha nke data batrị na ndabere batrị, ma na-agbanwe mmezi batrị ka ọ bụrụ mmezi ọgụgụ isi. Somerụ ọrụ, n’ikpeazụ, ọnụ ọgụgụ ndị nlele ka ọ bu, ma ọ bụ kedu oke nchekwa ahụ, iji kọwaa ọnọdụ batrị dị ugbu a.
Ọ bụrụ na m na-anya ụgbọ ala eletrik, ị ga-ahụ na ọtụtụ ụgbọ ala eletrik nọ na steeti na-agbanwekarị ma gbaa. N'ezie, nchekwa nchekwa ike otu nsogbu na ngwa nchekwa nchekwa sistemụ ume. Anyị na-atụ anya idozi ya site na data. Anyị nwere onodu atụ nke BMS nke dabara adaba.
Ka m kwuo maka nchekwa nchekwa ike. Onye ọ bụla na-ekwu na m nwere ike ime ya puku ugboro isii, na enwere ike iji ya puku ugbo ala. O siri ike ịkọ. Can nwere ike inyere ya aka dị ka usoro nchekwa ike, na-ekwu na oge 5,000. Ego ole ka esi eji ya eme ihe, n’ihi na batrị n’onwe ya nwere nnukwu nsogbu, mgbagha nke batrị bụ nkebi n’oge usoro nlaazu, batrị nke ọ bụla na-agbadata dị iche, ọdịiche dị n’etiti otu mkpụrụ ndụ na - aghọwanye ihe na - ekwekọghị n’ihe onye nrụpụta rụpụtara. Mbelata batrị dịkwa iche. Ike ole ka batrị a nwere ike iji ma nweta ume? Nke a bụ nsogbu chọrọ nyocha nlezianya. Dịka ọmụmaatụ, mgbe eji ụgbọala eletrik, a na-eji ha site na 10 ruo 90%, nlaghachi azụ nwere ike iji 60% ruo 70% ruo n'ókè ụfọdụ, nke na-eweta nnukwu nsogbu maka nchekwa nchekwa.
Anyị nwere ike iji mkpokọ ahụ dịka iwu ire ere mebiri emebi, kedu ka nhọrọ dị mma iji nweta arụmọrụ ka mma yana arụmọrụ ka mma, anyị nwere olile anya ịkekọta ya dịka iwu batrị siri dị, ngalaba 20 dị ka ọnụ wee bụrụ ọ dabara adaba ma ọ bụ 40 dabara adaba, nke na-eme nguzozi n'etiti ike eletriki na ike eletrik. Yabụ, anyị na-eme ihe maka nchekwa ike mgbanwe, nke bụkwa ọrụ anyị ime ihe a. N'ezie, enwere ebe dị mma iji ya na cascades. Echere m na iji ngwa ahia nwere ihe ụfọdụ bara na afọ abụọ gara aga, mana ọ bara uru iji ya mee n'ọdịnihu, mana na-echekwa maka arụ ọrụ nchaji na ịkwụpụ, ozugbo ọnụahịa batrị dara, enwere nsogbu ụfọdụ na cascading. Otu na - agbanwe agbanwe nwere ike idozi nnukwu nsogbu. Kinddị ụdị modular ọzọ dị elu na-ebelata ọnụahịa nke sistemụ niile. Nke kachasị ukwuu nwere ike ịkwalite ọnụego ojiji.
Dị ka batrị eji ya n'ime ụgbọ ala mgbe afọ atọ gachara, ọdịda ahụ erughị 8%, yana itinye n'ọrụ bụ naanị 60%. Ọ bụ n'ihi ọdịiche ya. Ọ bụrụ na ị jiri usoro iji 5 mee ihe, ị nwere ike nweta 70%, nke nwere ike melite ọnụego ojiji. Me ihe njikọ batrị ọnụ nwekwara ike imeziwanye ojiji batrị. Mgbe mmezi gasị, nchekwa nchekwa ike mụbara site na 33%.
N'ileghachi anya na ihe atụ a, mgbe itule, enwere ike ịbawanye ya na 7%, mgbe ịgakọtachara mgbanwe, m mụbara site na 3.5%, ma inye aka nwere ike ịbawanye site na 7%. Groupkpa ụta nwere ike ịgbanwe uru. N'ezie, ihe kpatara batrị nke ndị nrụpụta dị iche. Ọ dị mkpa ibu ụzọ mara ihe otu batrị a ga-abụ ma ọ bụ ihe nkesa paramita ga-abụ, mgbe ahụ ị ga - eme atụmatụ kachasị.
Nke a bụ atụmatụ a nakweere, modulu ahụ nwere ikike nweere onwe ya ugbu a, nke na-adaghị adaba maka ngwa ike dị elu.
Akụkụ nke ike nke modul ahụ bụ nke enwere ugbu a na-achịkwa ya. Sekit a dabara adaba maka igwe di elu na nke di elu ma na-eme ya ugboro ugboro. Nke a bụ ihe nchekwa batrị MMC dị mma maka nnukwu ọkụ na ike dị elu.
Nakwa banyere nyocha ọkwa batrị. Anọwo m na-ekwu na ikike batrị ekwekọghị, ọdịda ahụ na-enweghị atụ, ịka nkata batrị adịghị emegide ya, ikike na nguzogide nke ime ụlọ na-ebelata nke ukwuu. N'iji paramita a mara, ihe ị na-eji bụ ike na nguzogide nke ime. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchọta ụzọ ị ga-esi na-anọgidesi ike, ọ dị gị mkpa inwale ọdịiche SOC nke batrị nke ọ bụla, otu esi elele SOC nke otu sel a, mgbe ahụ ị nwere ike kwuo etu batrị a si bụrụ ihe na-enweghị isi, na ike kachasịnụ nwere ike ịbụ . Etu esi enweta otu SOC otu site na ijigide batrị site na SOC? Usoro dị ugbu a bụ itinye BMS na sistemụ batrị ma tụọ SOC a n'ịntanetị ozugbo. Anyị chọrọ ịkọwa ya n'ụzọ ọzọ. Anyị na-atụ anya na-agba ọsọ data nke usoro a gafere. Anyị na-enyocha SOC batrị na batrị site na data ndabere. SOH, kwalite batrị a Ya mere, anyị nwere olile anya na data batrị ụgbọ ala, ọ bụghị nnukwu data, bụ usoro data. Site na nkuzi igwe na Ngwuputa ihe, a na-agbakwunye ihe nlele nke usoro SOH, a na-enyekwa usoro maka njikwa batrị zuru oke na iwepu nke batrị dabere na nsonye ntule a.
Mgbe data ahụ bilitere, enwere uru ọzọ, enwere m ike ịme ịdọ aka ná ntị mbụ banyere ọnọdụ ahụike batrị. Ọkụ batrị ka na-eme ugboro ugboro, na usoro nchekwa ike ga-adịrịrị nchekwa. Anyi nwere olile anya ime ihe omuma banyere oge di elu na uzo di ogologo na ogologo oge site na nyocha nke nyocha, icho uzo di nkenke na nke ichoro na ntaneti iji me ihe nchebe, ma mechaa meziwanye nchekwa na ntukwasi obi nke ihe niile.
Site na nke a, enwere m ike nweta ọtụtụ akụkụ n'ọtụtụ buru ibu, otu bụ iji bulie ike nke sistemụ ahụ, nke abụọ bụ ịgbatị ndụ batrị, nke atọ bụ iji hụ na nchekwa, usoro nchekwa a nwere ike ịrụ ọrụ dabere .
Kedu data ole m ga-ebugo iji mezuo ihe m chọrọ? Achọrọ m ịchọta obere batrị nke na-ezute ọnọdụ batrị na-agba ọsọ. Ihe omuma ndi a nwere ike ikwado nyocha n’azu, data apughi ibu karia, nnukwu data buru ibu n’ezie nye netiti dum. Ọtụtụ milise sekọnd, ị na-ewere voltaji na ugbu a batrị ọ bụla, nke enweghị ike ibute n'uche mgbe ị na-enyefe ya na ndabere. Anyị achọtala ụzọ ugbu a, anyị nwere ike ịgwa gị, ugboro ole akara ga - abụrịrị, kedu data njiri ịkwesịrị ịgafe Anyị na - ejikọ data ndị a, ma nyefee ya na netwọkụ. Usoro batrị dị otu milisecond, nke ezuru iji gboo mkpa nyocha batrị. Ihe ndekọ data anyị dị ezigbo obere.
Nke ikpeazụ, anyị na-ekwu BMS, ọnụ ahịa nchekwa nchekwa na-aghọ ihe dị mkpa karịa ọnụahịa batrị. Ọ bụrụ na itinye ọrụ niile na BMS, enweghị ike belata ụgwọ nke BMS a. Ebe ọ bụ na enwere ike izipu data ahụ, enwere ike ịnwe ikpo okwu nyocha siri ike n'azụ m. Enwere m ike ime ka ọ dị mfe n'ihu. Enwere naanị data nlele data ma ọ bụ nchebe dị mfe n'ihu. Mee ngwanrọ SOC dị mfe, a na-eziga data ndị ọzọ site na nzụlite, nke a bụ ihe anyị na-eme ugbu a, atụmatụ steeti na nlele nke BMS dị n'okpuru, anyị na-agafe njikwa nchekwa oghere ike, ma n'ikpeazụ gafere na netwọkụ, ike. nchekwa njikwa ọnụ ga-enwe ụfọdụ usoro algorithm, ihe ndị na-esonụ bụ nchọpụta na nha nha. A na-eme ngụkọta ngwụcha ikpeazụ na netwọk ndabere. Nke a bụ usoro iwu ụlọ ahụ dum.
Ka anyị leba anya n'ịdị nfe ma ọ dị mfe ngbanwe nke ala oyibo, nke bụ ịha nhata, nnweta nke obere ọkụ na ị nweta nha anya inweta. Onye na-ahụ maka nchekwa ike ihe na-agwa ndị a ka esi eme ya, gụnyere SOC a na-eme ebe a, ndabere na-arụkwa ọrụ ọzọ. Nke a bụ ihe nghọta smart, ngalaba njikwa batrị, na onye nchịkwa oghere ọgụgụ isi nke anyị na-arụ ọrụ na ya, nke na-ebelata oke ọnụ ahịa nchekwa.
Batrị Lithium-Ion 3.6v, Ngwunye batrị, Batrị 20ah Lithium Ion, Ibe batrị Lithium, Sili batrị Lithium Ion, Batrị Lithium batrị,